Ahoana no Get ny Mailing List mpanjifa mba hanao zavatra ny Frequent Newsletters
Posted by: Fisayo Febroary 16, 2018
Ve ianao mamaky sy hanao zavatra rehetra hafatra nanolotra ny mailaka Inbox? Ve ianao fa tsy voa mafy amin'ny tolotra sy ny vokatra lehibe hafatra manokana raha marika mailaka hafatra ho an'ny famafana tsy namaky azy ireo? Moa ve ianao nampiasa ny aterineto mpandraharaha mailaka-barotra toy ny lehibe fomba lasibatra miezaka ny mpihaino? Azonao atao ny hahazo vokatra tsaratsara kokoa amin'ny alalan'ny fampiasana Alefaso Pulse.
Mpivarotra lehibe rehetra aterineto handefa Newsletters. Amin'ny alalan'ny mailaka ny dingan'ny-barotra, Hafanàm-po an mpandraharaha mampiasa matetika Newsletters hivarotra-tena mety ho mpanjifa ao anatin'ny lisitry ny mailaka. Fandefasana amin'ny alalan'ny mailaka manokana Newsletters-barotra dia ny fomba tsotra indrindra hahatratra ny mpanjifa. Ny olana anefa dia maro ireo mpanjifa mailaka tsy manokatra-barotra mailaka; sy ny aterineto mpivarotra tsy mahalala ny isan'ny mpanjifa izay manao.
Enter SendPulse. Izany no fitaovana dizitaly amin'ny alalan'ny izay afaka mahazo ny mpanjifa mba hamaky sy hanao zavatra eo amin'ny Newsletters. Ankoatra ny fahazoana ny lisitra mailaka hamaly ny Newsletters, SendPulse dia natao mba ho azo antoka ny hafatra tonga ny lasibatra mpihaino na aiza na aiza izy ireo, amin'ny fotoana rehetra, ary tsy maintsy. Raha toa ka tsy maniry ny hiala vola teo amin'ny vato fisaka ny mpamandrika, SendPulse dia ny soso-kevitra azy ireo hatao fitaovana fandoavana anao ny famantaranandro.
SendPulse dia miorina hanompo ny mailaka-barotra zavatra ilaina amin'ny fomba telo lehibe. Ireto izy ireo -
Nitombo Clickthrough mailaka
Izany dia manambara fa efa eo ianao miantehitra maharitra mailaka-barotra fampielezan-kevitra ho tonga ny lasibatra mpihaino. Fa SendPulse dia manampy anao koa. Izany miantoka fa ny mpanjifa hanokatra ny mailaka sy ny asa eo aminy amin'ny fanampiny 50% tahan'ny fahombiazana. Rehefa mety ny mpanjifa mamaly ny Newsletters mampitombo ny hatramin'ny 50%, Afaka matoky ianao mialoha ny mpivarotra bebe kokoa.
Ireto ny soa azo avy amin'ny fampiasana ny mailaka SendPulse-barotra ho an'ny fampielezan-kevitra -
50% Nitombo vintana ny manana ny mailaka nisokatra
SendPulse ny SMTP Server miantoka ny deliverability ny mailaka na inona na inona ny mpandray 'mailaka protocols
Fahaizana artifisialy mba ho mailaka manaiky, miaraka amin'ny antontan'isa momba misokatra mailaka, ary scheduler noho ny fandefasana mailaka avy amin'ny daty manokana.
Web manosika Notifications
Web hanoto fampahafantarana dia safidy hanatratra ny famandrihana fitaovana rehetra na dia tafiditra ao an-mailaka na tsia. Izany dia manome fahafahana hahazo ny mailing list mpanjifa tsy tena populating ny mailaka Inbox amin'ny hafatra manokana. Amin'ny tranonkala hanoto, dia afaka hampandre ny mpanjifa ny fanavaozam-baovao manan-danja izy ireo na dia tsy mifandray amin'ny aterineto.
SendPulse fampahafantarana ny teknolojia dia natao mba hanatratra famandrihana amin'ny hanoto hafatra na inona na inona ny fitaovana sy ny navigateur. Ny tanjona farany dia ny hahazo ny hafatra manerana ny mpanjifa sy mahazo azy ireo hanao izany ny toe-javatra na inona na inona izy ireo mahita ny tenany. Web hanoto fampahatsiahivana tsy overcrowd mailaka inboxes, nefa mpanjifa handray azy ireo ary mandray verifiable clickthrough tahan'ny amin'ny hafatra manokana.
Misy ny rafitra isan-karazany avy any noho ny fandefasana SMS ampahany, fa SendPulse trumps azy rehetra. Ny ampahany amin'ny SendPulse SMS teknolojia, dia afaka mandefa an'arivony hafatra manokana ny famandrihana tao amin'ny finday. Aiza ny mpanjifa tsy afaka miditra an-mailaka hamaky ny Newsletters na mandray hanoto fampahatsiahivana, dia afaka mandefa azy ireo SMS tsy misy olana. Amin'ny iray tsindry, dia afaka mandefa izany namboarina SMS ny an'arivony ny mpamandrika ary dia nanolotra ny finday amin'ny saika mitovy ny fotoana sy ny fotoana.
Inona koa no tsy maintsy ataonao Fantatrao Momba ny SendPulse?
SendPulse manana antsapaka mba hanolotra aterineto mpivarotra sy ny orinasa madinika. Ny sasany ireo -
Afaka ampanjifaina-jatony ny mailaka ho an'ny Newsletters iombonana
Scheduler noho ny fandefasana mailaka avy nomena amin'ny daty manokana
Subscription amin'ny teny for fanangonana tranonkala mpitsidika 'mailaka
Analytics for fandrefesana mailaka misokatra tahan'ny, kitihina rohy ary koa ny toerana misy ny mpanjifa
Easy fampidirana amin'ny CMS isan-karazany sy ny ecommerce sehatra
Liberty handefa hatramin'ny 15,000 namboarina mailaka maimaim-poana isam-bolana
SendPulse naorina hatramin'ny tany ka mba hihaona amin'ny ilain'ny rehetra sokajy mpivarotra an-tserasera. Ary nisy hoatr'izany ny mpivarotra ho an'ny mpivarotra, ary ny Integrated fahaizana artifisialy dia tratry ny ananany mpanjifa mba hanao asa lasibatra seamlessly. SendPulse no vola vaovao-kevitra fitaovana izay rehetra tokony hampavitrika mpandraharaha amin'izao fotoana izao ho an'ny fandraharahana hanatsarana ny traikefa; ary avy eo, tonga izany maimaim-poana ho an'ny rehetra ny fampiasana tsy misy miafina adidy.
Aoka ianao ho voalohany haneho hevitra amin'ny "Alefaso Pulse: Ahoana no Get ny Mailing List mpanjifa mba hanao zavatra ny Frequent Newsletters"